ဇာတ်ညွှန်းရေးနည်း | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 18/11/2021 19:01 | ယေဘုယျ
စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိခြင်း၊ စိတ်ကူးကောင်းရှိခြင်းသည် ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်း၏ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤသည်မှာ အစသာဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အဆိုပါ အတွေးအမြင်များကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ အများသူငှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေရန်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထားခဲ့သည်များကဲ့သို့အကြံပြုချက်အချို့ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
1 ဇာတ်ညွှန်းဆိုတာ ဘာလဲ။
2.2 အလုပ်ခေါင်းစဉ်ကို ရွေးပါ။
2.3.1 အဓိကဇာတ်ကောင်က ဘာကိုလိုချင်တာလဲ။
2.4 ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အခြေခံပြီး ဇာတ်လမ်းအစီအစဥ်
2.5 မူကြမ်းကို လက်ဖြင့်ဖန်တီးပါ။
2.6 နောက်ဆုံးမထိမီ ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် စာသားကို အနားပေးပါ။
ဇာတ်ညွှန်းဆိုသည်မှာ အခြားစာသားအမျိုးအစားများနှင့် အလွန်ကွဲပြားသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြင့် သင်ရေးသားသည့် စာသားဖြစ်သည်။ ဇာတ်ညွှန်းသည် ပြဇာတ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး အခြားသူများ၏ အာရုံခံစားမှုအားလုံးဖြင့် ခံစားရမည့် ပြဇာတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်သည်။ အခြားစာသားများနှင့်မတူဘဲ၊ ဇာတ်ညွှန်းကို ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကြည့်ရှုသူသည် သင့်စာသားကို ဖတ်ရှုမည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းကို ဇာတ်ဝင်ခန်းအဖြစ် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ဇာတ်ညွှန်းသည် ရုပ်မြင်သံကြားပရောဂျက်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု၊ သင့်တွင် တိကျသော နည်းဗျူဟာများ အတွဲလိုက်မရှိပါက စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုမှ ကောင်းမွန်သော ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် မလွယ်ကူပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မကြာခဏ ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အတွေး၊ အဲဒါကို သင်မြင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း အကောင်အထည်မဖော်ပါဘူး။
သင်အိပ်မက်မက်သည့်ပရောဂျက်အပေါ် အမှန်တကယ်သစ္စာရှိရှိ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်လာရန် သင့်စိတ်ကူးသည် တည်ဆောက်ပုံ၊ အလတ်စား၊ အမျိုးအစား၊ အကြောင်းအရာနှင့် ဘာသာစကားကဲ့သို့သော သော့အချို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အခြေခံကျပြီး အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ လိင်အပေါ်အခြေခံသည်။ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာအပေါ်အခြေခံ၍ သင်သည် ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မစတင်မီ ၎င်းတို့ကို စတင်စုစည်းရန် စိတ်ကူးများအားလုံးကို ချရေးပါ။
ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုတွင် သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံရှိရမည်။ ၎င်းသည် ဝတ္ထုမဟုတ်သောကြောင့်၊ ထိုကဲ့သို့ဖတ်ရမည့် စာသားကို သင် ကူးယူ၍မရပါ။ သင့်ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်ကောင်များအလိုက်၊ မြင်ကွင်းများအလိုက် စုစည်းထားရမည်၊ သို့မှသာ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းကို ရုပ်မြင်သံကြား လက်တွေ့တွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဖို့ ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းနဲ့ လုပ်စရာမလိုဘူး၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းက သင့်စိတ်ကူးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးစာရေးဆရာများစွာသည် ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုခြင်းထက် လက်ဖြင့်ရေးကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လက်နဲ့ရေးတဲ့အခါ သင့်ဦးနှောက်က သင့်ဆီကို စိတ်ကူးတွေကို တွန်းပို့နေတာကြောင့် အသွင်ပြောင်း၊ ပေါင်းထည့်၊ ဖယ်ထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ ပိုလွယ်တာကြောင့်ပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေ စီးဆင်းပါစေ။ ဘောပင်နှင့် စာရွက်ကိုယူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံကို မစဉ်းစားဘဲ စတင်ရေးသားပါ၊ နောက်ပိုင်းတွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် သင်၏ ဇာတ်ညွှန်းကို သင်ရေးသားသကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဇာတ်လမ်းမရေးခင်မှာ အဲဒါကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မင်းစိတ်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ စာသားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် စကားလုံးများပါ၀င်သည့် ယာယီခေါင်းစဉ်တစ်ခု ထည့်ပါ။ အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
ဇာတ်ညွှန်းကိုရွှေ့လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာကြောင့် ဇာတ်ကောင်တွေမှာတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အစကတည်းက ဇာတ်ကောင်တွေကို သေချာဆုံးဖြတ်ထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဒါတွေက ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အဓိကသော့ချက်၊ ၎င်းတို့၏ အမည် သို့မဟုတ် ရုပ်အဆင်းကိုကျော်လွန်၍ ယင်းတို့သည် ပျံသန်းရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ကဏ္ဍများဖြစ်သည်။
သို့သော် ဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီတွင် သင့်တွင် အချက်အလက် ပိုများလေ၊ ဇာတ်လမ်းကို အသက်ဝင်အောင် လုပ်ဖို့က ပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၊ ဝါသနာ ၊ အပ်နှံမှုကို မသိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းရေးရသည်မှာ အတူတူမဟုတ်သောကြောင့် ၊ အများပြည်သူသိသူဖြစ်သည့် María ၊ အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီး မိသားစုတစ်ခုထူထောင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသောယောက်ျားကို ရှာဖွေနေပါသည်။ . သင့်ဇာတ်ကောင်များပေါ်တွင် ဒေတာရှိခြင်းသည် ၎င်းတို့အပေါ်အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သောဇာတ်ကွက်ဖန်တီးရန် သင့်အား ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ကောင်းသောဇာတ်လမ်း သို့မဟုတ် ဇာတ်ညွှန်းတွင်၊ သမိုင်းတွင် မည်သည့်ဖြစ်ရပ်ကိုမဆို လှည့်ပတ်သည့် ဇာတ်လမ်းကို အမှတ်အသားပြုသော အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးရှိရမည်။. အဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်က ဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ သင်အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကို တွေးကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဇာတ်ကောင်ထံသို့ ဆွဲဆောင်နိုင်သောအရာဖြစ်သနည်း။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဇာတ်ကောင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဤအချက်ကို အကောင်းဆုံး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသူမှာ Homer Simpson ဖြစ်သည်။ စားချင်တယ်၊ အိပ်ချင်တယ်၊ မိုးရဲ့ ဘားမှာ ဆော့ပြီး ဘိုးလင်းကစားချင်တယ်။ အဲဒါတွေက သူ့ရဲ့ အဓိက မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး အဲဒါက စီးရီးရဲ့ အနှစ်သာရကို အမှတ်အသားပါပဲ။ အဓိကဇာတ်ကောင် လိုချင်တာကို အခြေခံပြီး ဇာတ်ကွက် အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးထားပါတယ်။. တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ချီပြီး သက်တမ်းကြာရှည်တဲ့ စီးရီးတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ငါတို့မှာ ဇာတ်ကောင်တွေ ရှိတော့ အဲဒါတွေကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ထည့်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများစွာကို သင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်ဇာတ်ညွှန်းတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်​လမ်းတစ်​ပုဒ်​ကို ဇာတ်​လမ်းတစ်​ခုစီ​ပေး ၎င်းသည် ပင်မဇာတ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး ခိုင်မာပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံကို သင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ဇာတ်ကောင်များ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်နှင့် အဓိက စိတ်ကူးဖြင့်၊ မူကြမ်းတစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်များအတွက် ရောင်စုံဘောပင်များနှင့် ဇာတ်လမ်းအတွက် အနက်ရောင်ကို အသုံးပြုပါ။ စတင်ရေးသားခြင်း၊ စကားလုံးများ၊ စာလုံးပေါင်း သို့မဟုတ် သဒ္ဒါအတွက် အလွန်အကျွံစိတ်မပူပါနှင့်၊ နောက်ပိုင်းတွင် သင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့် အရာအားလုံးကို ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးမထိမီ ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် စာသားကို အနားပေးပါ။
သင့်ခဲဖျက်ကို ပြီးသောအခါ ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် ထားလိုက်ပါ။ အဲဒါကို မကြည့်ပါနဲ့၊ ပြန်မဖတ်ပါနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ထပ်ပေါင်းထည့်တာ၊ ပြောင်းလဲတာ၊ ပြုပြင်တာတွေမှာ အစွဲအလမ်းကြီးလာတယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး မင်းရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို မင်းဖတ်ပြီးတာနဲ့၊ အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေကို ပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် အပြောင်းအလဲအချို့ လိုအပ်သည်။
သင့်ဇာတ်ညွှန်းကို အပြီးသတ်ရန်၊ script ဖော်မတ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖော်မတ်သို့ ပြောင်းရန် အချိန်တန်ပြီ။ ယခုအခါတွင် သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖော်မတ်မှ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် အစကတည်းက ဤနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် များစွာ လွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ချို့ယွင်းချက်များနှင့် မှန်ကန်သော ချို့ယွင်းမှုများကို ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။
ဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်းရေးဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လွှတ်ထားရမယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေ စီးဆင်းပြီး စာသားဖြစ်လာပါစေ။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို သင်ဂုဏ်ယူနိုင်သော ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်ရန် လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ယေဘုယျ » ဇာတ်ညွှန်းရေးနည်း